အချစ်ဆုံးလေးရေ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အချစ်ဆုံးလေးရေ …	11
Posted by Anzartone on Jul 22, 2015 in Poetry | 11 comments
မိုးကောင်းကင်ကြီး လိုပါပဲ …။
နေ ပူတယ် …။
နှင်း ကျတယ် …။
မိုး ရွာတယ် …။
တိမ်တိုက်တွေ နေကို ကွယ်လို့
လှပစေတဲ့ အခါတွေလည်း ရှိတယ်။
ခြောက်လှန့် အသံပေးတဲ့ အခါတွေလည်း ရှိတယ်။
သူ့ဆီက နေရောင်တွေ ဖြာကျတဲ့အခါ
သူ့ဆီက နှင်းစက်တွေနဲ့ ဖြန်းပက်လိုက်တဲ့ အခါ
သူ့ဆီက မိုးပွင့်တွေ ခြွေချလိုက်တဲ့အခါ
သူက ကျီစယ်လို့ ကစား
တိမ်ထုတွေနဲ့ နေရောင်ကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အခါ
စိတ်ဆိုးတဲ့သူတွေ ကလည်း ဆိုးကြပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ နှလုံးသားဟာ
ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲလို့ မသွားခဲ့ဘူး။
နေပူတဲ့အခါ ရှိမယ် …။
နှင်းကျတဲ့အခါ ရှိမယ် …။
မိုးရွာတဲ့အခါ ရှိမယ် …။
မိုးအုံ့တဲ့အခါ ရှိတယ် …။
အလှဆုံး အရောင်ခြယ်ထားတဲ့ အခါမျိုးတွေလည်း ရှိမယ် …။
အမည်းရောင် ဆိုးလို့ မိုးခြိမ်းသံတွေ ညံနေတဲ့ အခါမျိုးတွေလည်း ရှိမယ် …။
မပြောင်းလဲတဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ နှလုံးသားဆီမှာသာ
သက်ဆုံးတိုင် ခိုနားကြရအောင်လားကွယ် …..။
(Anniversary အမှတ်တရ ကဗျာ လက်ဆောင်)
လုံမလေးမွန်မွန် says: Happy Anniversary! Love you so much forever!
ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလက်ဆောင်တွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် စာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့တင် ပြည့်စုံပါတယ် ကိုကို …
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရွာဖူးစာ နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဗျိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: မြန်လိုက်တဲ့ အချိန်တွေ။
၂ နှစ် ရှိသွားပြီနော်။
အောင် မိုးသူ says: ကဘာကြီးအချစ်လိုတယ် လူတိုင်းအချစ်လိုတယ်
ချစ်တာ ပြသနာ ဘာမှမရှိ
တောင်ပေါ်သား says: လုံမရေ
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟမ်း… အဟမ်း… ပြေလည်ရင် ကျေနပ်တယ်…
ကွိုင်ရှာ ရန်ဖစ်မယ်ဆို… ဦးယေးနဲ့ ကိုရင်ဆာကို သတိမရပါနဲ့… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သွားစမ်းပါ မောင်အံ ရယ်။
အချစ် ဆိုတာ ကို မင်း က “မျက်ဝန်း များ နဲ့ စကား မပြောတတ် ဘဲ” နဲ့ များ။
လုံမ လေး စိတ် ပြေသွားပြီလား။
၂နှစ် ဆိုတာ နဲ တဲ့ အချစ်သက်တမ်း မဟုတ်ဘူး။
နောက်ထပ် ၂၅ ဆ မက ခိုင်မြဲစေသား။
နားလည် ခွင့်လွှတ်မှု နဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းများ တည်စေသား။
. ကျောက်စ် တို့ ဆာ တို့ နောက် အသစ်လေး တစ်စုံလောက်များ ထပ်ပြီး ဝါသနာပါဂီ မလုပ် ချင်တော့ ဘူးလား။ :-)))
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီး ဟီး … အရီးက ဂဇက် ဖွဘုတ်ဂရုမှာမရှိလို့ ဒိတ်အောက်တွားဘီ…
နောက်ထပ်တစ်တွဲက ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့ မန်းသူမန်းသားလေးတွေပါခီည…
နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် “လသဂျား” လို့ အမည်ရကြောင်းပါ… အား ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကဗျာလေးကတော့ ကြွေလောက်တယ်မောင်မောင်အံ…ငါတို့တုန်းက မှီငြမ်းတာပဲလုပ်ခဲ့တာ
.အဲ့လိုရေးတတ်ဖူး…ဘာပြောပြော ၀မ်းသာပါတယ်လေ…မပျယ်လွင့်မယ့်အချစ်တွေနဲ့အတူ အမြန်ဆုံးနီးစပ်နိုင်ကြပါစေ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လှပတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးဖြစ်ဘို့
Swal Taw Ywet says: ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် တခုခုလေးများ လုပ်ချင် အဲလေ
နီးစပ်ရာ လက်တို့ ပေးကြစေခလို။